I-Garden View Lodge
(366 okushiwo abanye)
U-Mary Ann uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Izeluleko ezivela eMnyangweni Wezempilo wase-Kansas zivame ukushintsha, futhi zinde kakhulu ukuthi zingathunyelwa lapha, ngakho-ke sicela ubone:
Ungakopisha futhi unamathisele incazelo engenhla esipheqululini sakho.
I-Garden View Lodge itholakala eLucas, Kansas, ngqo ngaphesheya komgwaqo ukusuka endaweni yobuciko yase-Garden of Eden.
Indaba ithi yakhelwe indodana yomdali weNgadi, uSamuel Perry Dinsmoor, ngeminyaka yawo-1920. Kungenzeka ukuthi kwakuyindlu yekhithi eyalethwa kumzila wesitimela.
Yindlu ehlanzekile, ehlanzekile futhi ethokomele egcinwe kahle, enomuzwa wedolobhana elincane. Kusikhumbuza ngokuvakashela ipulazi logogo nomkhulu bethu.
Yindlu ehlome ngokuphelele etholakala eLucas, Kansas, Grassroots Art Capital yaseKansas kanye nenye ye-8 Wonders yaseKansas. Sinekhishi ozolisebenzisa, kodwa siyaziswa ukuthi asinawo umshini wokuwasha izitsha.
Kulabo abahamba nge-I-70, uLucas ungamakhilomitha angu-18 eNyakatho yokuphuma kukaWilson. Uzoba nokufinyelela okugcwele endlini kanye nobumfihlo obuningi.
Amamayela angu-8 nje ukusuka eWilson Lake, iyindawo enhle yokubhukuda, ukugibela izikebhe, ukudoba nohambo lokuzingela.
Ungabona indawo yobuciko yaseGarden of Eden ngaphesheya komgwaqo, kanye nezithombe zeMiller's Park, futhi ungakwazi ukuhamba edolobheni ngamabhulokhi amathathu amafushane. Kuyindawo ethulile.
Ngaphandle kokuba yiGrassroots Art Capital yaseKansas, uLucas futhi ungomunye weZimangaliso eziyi-8 zaseKansas. Kuningi ongakubona kuleli dolobhana elincane elinabahlali abangama-400. Ungachitha usuku olugcwele uvakashela zonke izingosi.
I-Garden View Lodge iseduze neGarden of Eden, izithombe eziqoshiwe zaseMiller's Park, Iqoqo Elikhulu Kunawo Wonke Emhlabeni Lezinto Ezincane Kunazo Zonke Emhlabeni, Isikhungo Sobuciko SeGrassroots, iFlorence Deeble House neRock Garden, Iposi, isitolo sotshwala, isitolo sezinto zokwakha, umtapo wolwazi one-inthanethi. i-hotspot, isitolo esithenga kalula/igalaji likaphethiloli elinesitolo sokudla, izindawo zokudlela, kanye nethiyetha yefilimu edlalwa okokuqala. Leli yidolobhana elincane futhi yonke into ivalwa ngo-10pm, ngakho-ke sicela ugcine lokhu engqondweni uma ufika ngemva kwesikhathi (njengokudla noma igesi).
Okukhangayo okusanda kungezwa yi-Bowl Plaza, indawo yokuqala nehlotshiswe kakhulu yezindlu zangasese zomphakathi! Ungakwazi ukuhamba ngezinyawo kuzo zonke lezi zindawo.
Kulabo kini abangabashayeli bezindiza abajwayelekile, isikhumulo sezindiza saseLucas, 38K, siyi-1485 MSL. I-asphalt 17-35 runway yayo ingamamitha angama-2940 x 50 anokukhanya okungapheli ebusuku. Ungakwazi itekisi eya egalaji likaphethiloli eliseduze ukuze uthole uphethiloli ongenawo umthofu. (Ayikho i-av fuel etholakalayo.) Kuyibanga elihambayo ukuya endlini yethu.
Sine-DIRECTV, 2 TV, kanye nezidlali ze-DVD ezi-2. Zizwe ukhululekile ukuletha ama-DVD evidiyo akho, noma umtapo wolwazi unamavidiyo ongawakhokha. Kukhona i-wireless hotspot emtatsheni wezincwadi, eningizimu nje yezimpambano zomgwaqo u-Second and Main Street, futhi iningi lama-smartphones athola isevisi enhle endaweni.
Izivakashi eziningi zithembele ekuletheni amakhompyutha aphathekayo noma amathebulethi azo ukuze zizijabulise.
Nge-Wi-Fi, ungasebenzisa insizakalo ye-Garden of Eden, engadingi iphasiwedi.
Sinezihlalo zotshani kanye negrill ye-Weber etholakalayo uma ungathanda ukusebenzisa igceke.
Okuhle kunakho konke, lesi isilungiselelo esithulile lapho ungajabulela khona ukuphumula ebusuku.
4.72(366 okushiwo abanye)
4.72 out of 5 stars from 366 reviews
4.72 · 366 okushiwo abanye
Umgwaqo ubanzi, unikeza indawo eyanele yokupaka ngisho nakulabo kini abadonsa ama-trailer. Ungakwazi futhi ukupaka ku-driveway. Kunombono omuhle wensimu yase-Edene, futhi izitolo nezitolo ziseduze.
Kusukela ngomhlaka-1 Julayi, sifake indawo kagesi eduze komgwaqo wethu ukuze uvumele ukushajwa kwezikebhe nezimoto.
Sicela uhlale uthintana nosivakashi wethu, uMary Ann, ukuze umeluleke ngezinhlelo zakho zokufika. Uzolungiselela indlu futhi aqinisekise ukuthi uyazinza. Wazi kahle ngomphakathi, ngakho angakweluleka ngezisetshenziswa, imisebenzi, kanye nemicimbi.
Sihlele ukuzihlola, futhi nizoba nendlu yenu. Uma kukhona okudingayo, ungamthola ngomakhalekhukhwini noma nge-imeyili.
Sicela uhlale uthintana nosivakashi wethu, uMary Ann, ukuze umeluleke ngezinhlelo zakho zokufika. Uzolungiselela indlu futhi aqinisekise ukuthi uyazinza. Wazi kahle ngomphakathi, n…